သငျသညျအကြှနျုပျတို့သညျစစျဆေးကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြကြောင်းသည်အခြားအရည်များလုပ်နေဖို့အပြင်တစ်ဦးကိုအသုံးပြုကားတစ်စီးကိုဝယ်ယူနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျကိုလည်းမော်တော်ယာဉ်ဘရိတ်စစျဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်. တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်ပေါ်ဘရိတ်ထွက်ဝတ်ဆင်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကြသည်တစ်ချက်ရှိပါတယ်. ဒါဟာသင်ဘရိတ်အုပ်ကိုလျှောက်ထားသည့်အခါမော်တော်ယာဉ်ကိုရပ်တန့်သောရဟတ်နှင့် pads အကြားပွတ်တိုက်ဖြစ်ပါသည်. ထို pads နှင့် discs တွေကိုနှစ်မျိုးလုံးခိုင်မာစေသံမဏိထွက်စေကြ၏ အကယ်. တစ်ခုခုရပ်တန့်အာဏာကိုမရမယ်လို့. ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ကားများနှင့်ကုန်တင်ကားပေါ်တွင်ရှေ့တွင်ဘရိတ်စစ်ဆေးနေကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်.
ပွင့်လင်းဘီးဝန်းနှင့်အတူအသစ်များကိုမော်တော်ကားတွင်ကဘရိတ်အုပ်၏အခြေအနေမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တစ်ချက်ရဖို့တရားမျှတစွာလွယ်ကူသောရှိနိုင်ပါသည်. ရှေ့ဘရိတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအကြားရှိပါတယ် 60 နှင့် 70 သင့်ရဲ့ရပ်တန်ခိုးတော်၏ရာခိုင်နှုန်းက. သင်ပထမဦးဆုံးယာဉ်မှတက်လမ်းလျှောက်ကြသောအခါသင်တို့ကိုအနားကွပ်မှတဆင့်ရှာဖွေနေနှင့်ရဟတ်၏အခြေအနေစစ်ဆေးနေသဖြင့်ရှေ့ဘရိတ်ရဟတ်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်. မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်မခံကြောင်းသေချာပါစေ, မဟုတ်ရင်သူတို့ထိပူပြင်းဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်. မျှော်လင့်ကိုဘီးဝန်းသူတို့ကိုသင်မှာအကောင်းတစ်ဦးတစ်ချက်ရနိုင်အောင်လုံလောက်တဲ့ဖွင့်. သင်ရဟတ်ဖြတ်ပြီးဆိုကုန်းသတိထားမိလျှင်ကြိုးစားပါနှင့်ကြည့်ရှု. သင်အနားကွပ်အားဖြင့်သင်တို့၏လက်ညှိုးကိုကပ်နိုင်လျှင်သင်သည်လည်းထိုရဟတ်ဖြတ်ပြီးကုန်းရှိပါတယ်လျှင် detect လုပ်ဖို့ရဟတ်ခံစားနိုင်ပါတယ်. အဲဒီမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, မော်တော်ယာဉ်မကြာမီတစ်ဘရိတ်အလုပ်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ. ထိုရဟတ်ကောင်းတဲ့နှင့်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ပြီးလျှင်သောဘရိတ်ကောင်းသောအသွင်သဏ္ဌာန်၌နေသောကောင်းတစ်ဦးအရိပ်အယောင်ဖြစ်ပါသည်.
သင်တို့သည်လည်းပါးပျဉ်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဘရိတ်အရည်စစျဆေးဖို့လိုပေမည်. ဘရိတ်အရည်သေတ္တာကလေး၏အပြင်ဘက်အပေါ်တစ်ဦး level ကိုညွှန်ပြချက်တစ်ခုခုရှိပါသည်, ဒါမှမဟုတ် filler ဦးထုပ်ပေါ်မှာကျဆင်းလာချောင်းကိုရှိပါတယ်. သတ်မှတ်ထားသောကန့်သတ်အတွင်းမှာအရည်ကြောင်းသေချာပါစေ. ဒါကြောင့်အနိမ့်သည်ဆိုပါကထိုသို့မော်တော်ယာဉ်တစ်ဘရိတ်အလုပ်၏လိုအပ်ချက်အတွက်ကြောင်းသည်အခြားအညွှန်းကိန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်. ထို pads ကိုဝတ်ဆင်အဖြစ်, ထို calipers အတွက် piston ဝေးကွာပိုပြီးအရည်များအသုံးပြုခြင်းလိုအပ်ခြင်းတိုးချဲ့.
အခုတော့ရှေ့ဆက်သွားနှင့်မော်တော်ယာဉ်အတွက်ရရက်နေ့တွင်စက်နှိုးလှည့်, ဒါပေမယ့်ကားကိုမစတင်ပါဘူး. ထို dash ပေါ်တွင်ညွှန်ပြချက်အလင်းအိမ်၏အပေါင်းတို့၏အသိပေးစာ Take. Does the vehicle have an ABS light or brake light? ကို ABS အလငျးကိုဆန့်ကျင်-သော့ခတ်ဘရိတ်စနစ်ဖြစ်ပါသည်နှင့်အစွန်းရောက်ဘရိတ်အခြေအနေများအောက်တွင်တစ်ဦးနှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်သို့သွားကနေမော်တော်ယာဉ်စောင့်ရှောက်ဖို့တခြားရထားဘီးမှဘရိတ်အာဏာကို diverts. ဤသည်အလင်း dash နှင့်တစ်ဦးအပေါ်များသောအားဖြင့်အဝါရောင် “ဘရိတ်” အလငျးကိုများသောအားဖြင့်နီ. အခုဆိုရင်ကားကိုစတင်နှင့်ဤမီးလုံးထဲကထွက်ဆင်းသေချာပါစေ. သူတို့ကို turn off လိုလျှင်, ထို့နောက်ဘရိတ်စနစ်ထဲမှာအရာအားလုံးအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သင့်. တစ်ဦးကို ABS ဘရိတ်အလငျးကိုသို့မဟုတ်အလငျးကိုအပေါ်တည်လျှင်, ထို့နောက်ဘရိတ်စနစ်က servicing ၏လိုအပ်ချက်အတွက်ဖြစ်ပါသည်.
နောက်တစ်ခု, သင်ရှေ့ဆက်သွားနှင့်မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်ချင်. သင်ဘရိတ် apply နှင့်စတီယာရင်ဘီးဘာလုပ်တယ်အဖြစ်အသိပေးစာယူကားမောင်းနေစဉ်. ယာဉ်တစ်ဖြောင့်မျဉ်းတစ်ကြောင်းအတွက်သွားကြဖို့ဆက်လက်ပါသလား, သို့မဟုတ်ပါကတဦးတည်းခြမ်းမှဆွဲထုတ်သို့မဟုတ်အခြားပါဘူး. အဆိုပါမော်တော်ယာဉ်တစ်ဖြောင့်မျဉ်းတစ်ကြောင်းအတွက်သွားကြဖို့ဆက်လက်သင့်တယ်, တခြမ်းသို့မဟုတ်အခြားခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့လျှင်ဘရိတ်အုပ်တဦးတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်ထက်ပိုခက်ခဲအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးဘရိတ်ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်နေသေးကြောင်းဆိုတာကိုပြသနေသည်. ဘရိတ်အုပ်လျှောက်ထားခြင်းနေစဉ်သင်သည်လည်းနားမထောငျခငျြတ. သူတို့တစ်တွေ squealing ဆူညံသံစေခြင်းသို့မဟုတ်ဆူညံသံကြိတ်လုပ်ပါ? သူတို့ squeal လျှင်တစ်ဘရိတ်အလုပ်ကြောင့်ထားတဲ့အညွှန်းကိန်းဖြစ်ပါသည်. အများစုကမော်တော်ကားယခုအခေါ်အဘယ်သို့တပ်ဆင်ထားကြသည် “Squealers” ဘရိတ် pads အပေါ်. ထို pads ကိုတယောအချက်မှဆင်းဝတ်ဆင်သောအခါဒါကြောင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ် “squealer” သင်မော်တော်ယာဉ် pads လိုအပ်ကြောင်းနှင့်ရဟတ်ကာကွယ်ပေးနိုင်အသိပေးထိုရဟတ်ကိုထိမိ. သငျသညျကွားလြှငျကြိတ် – ကောင်းစွာကြောင့်ကျိန်းသေဘရိတ်အုပ်မှာကြည့်ရှုရန်ပြင်ဆိုင်ကိုသွားရန်လိုအပ်သည်.
သငျသညျ purchasing ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသည်အသစ်များကိုမော်တော်ယာဉ်များတွင်, သငျသညျလညျးအမိန့်ပေးနိုငျ မော်တော်ယာဉ်သမိုင်းကိုအစီရင်ခံစာ ယာဉ်ဖဲဝေသူကထိုသို့ servicing ဘို့အချိန်ကိုပြသလျှင်ထိန်းသိမ်းထားထားလျှင်ကြည့်ဖို့. သို့သော်, ဤသူမှတ်တမ်းများရရှိနိုင်ပါသည်မဖြစ်စေခြင်းငှါဒါမော်တော်ယာဉ်ဖဲဝေသူကထိန်းသိမ်းထားခဲ့ကြမည်မဟုတ်ပေ. ဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်, သငျသညျဝယ်ခင်, သင်သင်စိတ်၏အနည်းငယ်ပိုအပိုင်းအစပေးစေခြင်းငှါထွက် check လုပ်ထားရှိသည်ဖို့သင့်ဒေသခံစက်ပြင်ဆရာမှမော်တော်ယာဉ်ယူနိုင်လျှင်မေးရန်.